I-Little Moose Lodge: Inkosi/Indlovukazi (Igumbi 1 kwangu-7) - I-Airbnb
I-Little Moose Lodge: Inkosi/Indlovukazi (Igumbi 1 kwangu-7)
U-Juline Ungumbungazi ovelele
Igumbi #1: Ikamelo elikhulu elinombhede we-King neNdlovukazi, ubhavu wangasese oneshawa/ubhavu, i-microwave, umshini wokwenza ikhofi, itafula elinezihlalo ezine, isiqandisi esincane, futhi lihlanganyela indlu nesitayela sethu sokudlela.
Indawo yokudlela okwamanje ivulekele i-Lunch and Dinner
12-8 I-lodge yethu enhle inengqikithi yamakamelo angu-7 atholakalayo okubhukha nokuzijabulisa kwakho. Siyajabula ukukuqondisa kuwo wonke amathuba amahle okuphumula indawo yethu enhle enawo.
I-Little Moose Lodge iyakwazi ukubungaza imicimbi yakho yomuntu siqu noma yebhizinisi endaweni yethu yokudlela enhle ye-rustic log. Sinezindawo zokuhlala ezanele ngaphakathi kanye nompheme omuhle wangaphandle onezihlalo kanye nokubukeka kwe-Baldy Mountain. Inhloso yethu ukukunikeza impatho engcono kakhulu yamakhasimende ngesikhathi sokuvakasha kwakho. Kuwukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka ngamasevisi asezingeni eliphezulu kuzo zonke izivakashi zethu.
I-Little Moose Lodge inamakamelo anobungane ezilwane ezifuywayo atholakalayo anedola elingu- $ 25.00 ngesilwane esifuywayo/imali yobusuku ngabunye.
Wonke amakamelo e-Little Moose Lodge afakwe ku:
https://www.airbnb.com/users/337609995/listings Silandele ku-Facebook @ LittleMooseLodgeIdaho
4.83 · 72 okushiwo abanye
Sicela ungene endaweni yokudlela ye-Little Moose Lodge. Amahora okudlela ngu-11:00 am - 9: 00 pm izinsuku ezingu-7 ngeviki. Sicela usazise kusengaphambili uma uzongena ngemva kuka-8:30 ntambama.
Umphathi wethu uhlala nje imizuzu engu- emgwaqweni futhi ubizwa ngocingo nganoma yisiphi isimo esiphuthumayo ongase ube naso.
Sicela usishayele ucingo uma ungathanda ukubhukha usuku olufanayo ngemva kuka-9:00 ntambama. Inombolo yethu yocingo ingatholakala ekhasini lethu le-Facebook @ littlemooselodgeidaho
Sicela ungene endaweni yokudlela ye-Little Moose Lodge. Amahora okudlela ngu-11:00 am - 9: 00 pm izinsuku ezingu-7 ngeviki. Sicela usazise kusengaphambili uma uzongena ngemva kuka…
Hlola ezinye izinketho ezise- Irwin namaphethelo